Translate Myanmar (Burmese) to Bengali | Multilang.space
translate Myanmar (Burmese) to Bengali, Myanmar (Burmese) to Bengali translations, Myanmar (Burmese) to Bengali Google Translate ,
မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား হ্যালো, আপনি কেমন আছেন
မည်သူမဆိုရှိပါသလား? এখানে কেউ আছে?
ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ আমি তোমাকে সত্যিই অনেক ভালবাসি
ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ, এই হ্যামবার্গার খরচ কত?
သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား? আপনি আমাকে একটি ট্যাক্সি বলতে পারেন?
ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး আমি দুঃখিত
တဆိတ်လောက် মাফ করবেন
ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို আমি আগ্রহী
အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ আমার ফ্লাইট বিলম্বিত ছিল
ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို আমি ব্যবসার জন্য এখানে আছি
မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည် হ্যালো আমার নাম হচ্ছে
ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို আমি দুঃখিত, কিন্তু আমি বিবাহিত
ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ် আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই
သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား? আপনি আমাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যেতে পারেন?
ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ এখন সময় কি, দয়া করে?
အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ? নিকটস্থ পুলিশ স্টেশন কোথায়?
ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား? আমি কি আপনার ফোন চার্জার ধার করতে পারি?
ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား? আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারেন?
ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ? আমাকে একটা পানীয় দাও, প্লিজ?
ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ? এটা কত টাকা লাগে?
ငါ gluten မှမတည့်ဘူး আমি অ্যালার্জি থেকে গ্লুটেন
ဆရာဝန်ခေါ်ပါ একজন ডাক্তারকে ফোন করুন
ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော ডাক্তার আছে কি?
ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား? আমি কি কল করতে পারি?
ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။ আমাকে আপনার বস কল করুন দয়া করে।
ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည် এই জায়গাটি খুব সুন্দর
ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ আমাকে দয়া করে হোটেলে নিয়ে যাও
အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ? আমার রুম নম্বর কি?